'Hidhaa bahuu Sheeh Mohaammad al-Amuudiif MM Abiy gahee olaanaa qabu' - BBC News Afaan Oromoo
Dureessi dhalootaan Itoophiyaa, lammii Saa'udii Arabiyaa ka tahan Sheeh Mohaammad Huseen al-Amuudii hidhaa ji'oota kudha afuriin booda gadhiifamaniiru.
Dureessi kun abbootii qabeenyaa fi angawoota Saa'udii kanneen biroo waliin qorannoo malaammaltummaaf jecha, hoteela abbaa urjii shanii Ritz-Carlton'tti qabamanii hidhaman.
Akka odeeffannoon barruulee Forbes jedhutti, abbaa qabeenyaa kanaan dureessa Itoophiyaa keessaa sadarkaa 1ffaa, akkasumas Saa'udii Arabiyaatti ammoo sadarkaa lammaffaarra argamu.
Dubbi himaan maatii kanaa waan jedhan, Al-Amuudiin mana isaanii Jiddaa jiru galaniiru.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad, wayita Saa'udii Arabiyaatti imalanii turan ilma mootii Bin Salmaan waliin walarganii, waahee hidhamuusaanii itti kaasuusaanii, waajirri isaanii ibseera.
''Hidhaa bahuu Sheeh Mohaammad al-Amuudiif MM Abiy gahee olaanaa qabu''
Duula farra malaamaltummaa mootummaan Saa'udii adeemsiseen dureessota biyyattii waliin baatii 14f hidhaa kan dabarsan Alii-alaamudii akka hiikamaniif shoorrii ministira mummee Abiy Ahimad olaanaa akka ture abuukaatoon dureessichaa Takkaa Asfaaw BBCtti himaniiru.
Obbo Takkaan ''Kaleessa (Dilbata) bilbilaan haasofneerra. Fayyaan isaanii haala gaariirra jira.
Maatii isaaniittis makamaniiru. Yoom gara Itoophiyaa akka dhufan yoo beekamuu baateyyuu, dhufuun isaanii garuu hin hafu,'' jechuun dubbataniiru.
Bara darbe keessa Al-Amuudiin akka hiikamaniif carraaqqii gochaa turuu kan himan abukaatoon isaanii,'' ministirri mummee al lama Saa'udiitti argamuun aanga'oota biyyattii waliin marii taasisaniiru. Kanaaf hiikamuu isaaniif tattaaffiin isaanii gahee guddaa qaba jechuu dha''
Waajjirri ministira mummee fuula feeesbuukii irraatti barreefama ifa baaseen MM Abiy Ahimad Ji'a Caamsaa 2010 jalqabee dureessicha hiiksisuuf tattaaffi godhamuufi dhiyeenyattii biyyattiia akka deebi'an isa MM mummee galma Bar-Kumeetti dubbatan eereera. Nagaan akka galanis hawwii ibseera.
Baatii 14 dura dureessoti malaamaltummaan shakkamanii hidhaman turan lakkofsi isaanii muraasa kan hin jadhamne maallaqa jabaa kaffalanii bahaniiru jedhama.
''Mohaammad Huseen al-Amuudii hiikamuuf qarshii kaffalaniiru?'' jechuun gaaffii dhiyaateef , abukaatoon isaanii obbo Takkaa' 'kaffalaniiru jedhee dubbachuun natti ulfaata,''
Akkaataa itti hiikaman kanadha jedhee dubbachuun na dhiba. Ani garuu qarshiin guddaa kaffalameera jedhee hin amanu jedhaniiru.
Al-Amuudiin eenyu isaan?
Odeeffannoon barruullee Forbes waa'eesaanii waan jedhu, Sheh Mohaammad Huseen al-Amuudii abbaasaanii lammii Saa'udii fi haadhasaanii lammii Itoophiyaa qaban irraa, Itoophiyaa magaalaa Dasseetti dhalatan.
Barruuleen kun umuriin dureessa kanaa ganna 72 jedha.
Maddi badhaadhina isaanis, ''Boba'aa, maddeen garagaraa fi tattaaffii ofiitiin,'' jechuun ibsa.
Lammii Saa'udii Arabiyaa ka tahan dureessi kun, tarree dureessotaa Forbes ALA 2017tti baaseen, qabeenya tilmaamni isaa doolaara biiliyoona 10.3 qabaachuun, addunyaarraa sadarkaa 159rra argamu.
Goodayyaa suuraa Hoteela ritz-carlton: kan al-Amuudiin keessatti hidhamanii turan
Erga mootummaan Dargii aangoorraa bu'ee, ADWUI'n aangoo to'atee booda gara biyyaati deebi'uun invastimantiirra kan bobba'an Al-Amuudiin, kaampaaniiwwan gurguddoo Itoophiyaa keessa gosa hojii garagaraarratti hojjetan hedduu qabu.
Maddi badhaadhina isaanii irra caalaan boba'aa haa tahu malee, qonna, hoteela, ijaarsa, riil isteet (manneen jireenyaa) hospitaala, leenjii fi qorannoo, faayinaansii fi kanneen biroorratti, Ameerikaa, Awurooppaa, Afriikaa fi biyyoota Giddu-gala Bahaa keessaa qabu.
Dureessi kun kubbaaniyyaawwan biyyoota garagaraa keessaa qaban keessa namoota 200,000 tahaniif carraa hojii uumaniiru.
Lakkoofsi dhaabbilee Itoophiyaa keessaa qaban 70 kan tahu wayita tahu, namoota 40,000 tahan qacaranii hojjechiisu.
Al-Amuudiin Afaanota biyya alaa keessaa Afaan Arabaa, Ingiliizii fi Xaaliyaanii kan dubbatan yemmuu tahu, biyya keessaa ammoo Afaan Amaaraa fi Afaan Tigree dubbachuu danda'u.
Oduun gadhiifamuu biliyeenara kanaa erga dhaga'amee kaasee, fayydamtoonni miidiyaalee hawaasummaa hedduun wanta itti dhaga'ame ibsachaa jiru.
Kaan biyyatti deebi'anii mana murtiitti haa dhiyaatan wayita jedhan, kaam ammoo lakkii hin dhufin achumatti haa hafan jechaa jiru.
Keessattuu ammoo kaampaanii isaanii Warshaa Warqee Lagadambii Shaakiisootti argamurratti komii qaban hadheessanii kan dubbatanis jiru.
BBC Afaan Oromoos bara 2018 keessa gara naannichaa imaluun rakkoo fayyaa warshaan warqee kun geessisaa jira jedhame ilaalee ture.
Image Copyright @Jawar_Mohammed @Jawar_Mohammed
Ogeessi seeraa Awwal Qaasim Aloo, Al-Amuudiin qabeenya Itoophiyaa keessaa baaseerraa kan biyyatt galchetu caala jechuun morma.
Geessituu kana cuqaasuun banuu dandeessu.
Hayyamni warqee baasuu MIDROC dhowwame